भारतमा पनि १८६ जना यात्रु बोकेको विमानको आकाशमै इन्जिन फेल !
HOME » भारतमा पनि १८६ जना यात्रु बोकेको विमानको आकाशमै इन्जिन फेल !
एजेन्सी। नेपालमा दुखद् विमान दुर्घटना भएकै दिन भारतमा उडिरहेको विमानको इन्जिन अकस्मात बन्द भएपछि आज इण्डिगो एयसलाइन्सका ४७ उडान रद्द गरिएका छन् । भारतको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ सिभिल एभिएसनले एयसबस ए–३२० विमानका प्रेट एण्ड ह्वीटनी इन्जिनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । हिजोमात्र अहमदाबादबाट लखनउ गइरहेको इण्डिगो एयरलाइन्सको एक विमानको इन्जिन हावामै बन्द भएको थियो ।